Mr Creator – All Presidents … Man! | MoeMaKa Burmese News & Media
ကာတွန်း ဘီရုမာ - သူတွေး ကိုယ်တွေး
ကာတွန်း မောင်မောင်ဖောင်တိန် - ကယ်တင်ရှင်တွေ
ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ပြောထားပြီးသားနော် ...
ကာတွန်း ဆွေသား - အဘ နှင့် သားများ
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး - နောက် ၅ နှစ် တောင် မခံတော့ဘူး
Mr Creator – All Presidents … Man!
Mr မောင်တီထွင် (creator) – သားကြီးလာရင် သမ္မတကြီး လုပ်မယ် …
ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၁၃